Somaliland oo u diyaar garoobeysa qaxootiga Yemen – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
6th April 2015 A warsame Af Soomaali, Featured 0
Mareeg.com: Somaliland ayaa bilowday diyaarinta goobo lagu soo dhaweeyo qaxootiga ka cararaya dalka Yemen, ee kasoo degaya dekedda Berbera.
Wasiirka Dib u dejinta Somaliland, Cali Siciid Raygal, oo ay weheliyaan mas’uuliyiin ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo Hay’adda Qaxoontiga Aduunka UNHCR ayaa Berbera u tagay diyaarinta goobo la dejiyo qaxoonti la fiilayo inay ka yimaadaan dalka Yemen oo qaarkood jidka ku soo jiraan.
Wasiirka ayaa sheegay in dadkii ka soo qaxayay dagaalka Yemen uu halkaasi dagaalku ku qabsaday kadibna ay waayeen meel ay ka baxaan maadaama ay jiraan Xayiraado dhanka Cirka, Badda iyo Bariga ah, hase ahaatee haataan laga yaabo in dadka ku helaan jidad ay kusoo baxsadaan.
“Waxaanu diyaarinaynaa meelo Berbera ku yaala oo lagu hubiyo laguna baadho qaxoontiga ka imanaya Yemen, meelahaas oo ay ku sugnaan doonaan ilaa 3 maalmood kadibna loo qaadi doono magaalooyinka kale ee qabow maadaama Berbera tahay magaalo Xeebeed kulul” ayuu yiri Wasiir Cali Siciid Raygal oo BBC-da uga waramay arrintan.
Wasiirku waxa uu sheegay inay xogo ku hayaan in qaxoonti badan jidka ku soo jiro sidoo kalena la filayo in qaar badani qorshaynayaan sidii ay Somaliland u iman lahaayeen.
Muqdisho: Xildhibaan Xuseen Baantuu oo geeriyooday